Oge: jirichaa Homelọ Gị ma ọ bụ Ihu ọdịda gị were ihe asaa ndị a iberibe | Martech Zone
Oge: jirichaa Homelọ Gị ma ọ bụ Ihu ọdịda gị jiri ihe asaa ndị a dị n’ime ya
Thursday, June 6, 2019 Satọde, 8 Juun 2019 Douglas Karr
N'ime afọ iri gara aga, anyị ahụla n'ezie ndị ọbịa na weebụsaịtị na-akpa àgwà dị iche iche. Afọ ndị gara aga, anyị wuru saịtị ndị edepụtara ngwaahịa, atụmatụ, na ozi ụlọ ọrụ… ha niile gbadoro anya na ụlọ ọrụ ndị mere.
Ugbu a, ndị na-azụ ahịa na azụmaahịa na-agbadata na ibe obibi ma na-agbadata ibe iji nyochaa nzụta ọzọ ha. Mana ha anaghị achọ ndepụta nke njirimara ma ọ bụ ọrụ gị, ha na-achọ iji hụ na ị ghọtara ha nakwa na ị bụ ezigbo onye gị na ya na-azụ ahịa.
Ruo afọ iri ugbu a, anọ m na-amanye ụlọ ọrụ ịzụ ahịa ha uru karịa atụmatụ ha. Mana ugbua, ihu ulo kwesiri ntukwasi obi ma obu odide kwesiri ichota uzo asaa di iche iche iji mee nke oma:
nsogbu - Kọwaa nsogbu nke atụmanya gị nwere na ị na-edozi ndị ahịa (mana ekwula ụlọ ọrụ gị… ma).
Ihe akaebe - Nye nkwado ọnụọgụ nkwado ma ọ bụ onye ndu ụlọ ọrụ na-enye nkasi obi na ọ bụ nsogbu nkịtị. Jiri nyocha mbu, nyocha nke abuo, ma obu ndi ozo nke atukwasiri obi.
mkpebi - Nye ozi banyere ndị mmadụ, usoro na nyiwe na-enyere aka belata nsogbu ahụ. Ọzọ, nke a abụghị ebe ị na-egbochi ụlọ ọrụ gị… ọ bụ ohere ịnye ozi na omume ụlọ ọrụ, ma ọ bụ usoro ị na-etinye na-ahụkarị ebe niile.
Okwu Mmalite - Webata ụlọ ọrụ gị, ngwa ahịa, ma ọ bụ aka ọrụ gị. Nke a bụ obere okwu na-emeghe ụzọ.
Overview - Nye nkọwa nke ihe ngwọta gị, na-ekwughachi otu esi edozi nsogbu ahụ akọwapụtara.
Dị iche - Dokwuo anya ihe mere ndị ahịa ga-achọ ịzụta n'aka gị. Nke a nwere ike ịbụ azịza ọhụụ gị, ahụmịhe gị, ma ọ bụ ọbụlagodi ụlọ ọrụ gị nke ọma.
Akaebe gbasara mmadụ - Nye ihe akaebe, onyinye, asambodo, ma ọ bụ ndị ahịa na-enye ihe akaebe na ị na-eme ihe ị kwuru na ị na-eme. Nke a nwekwara ike ịbụ akaebe (gụnyere foto ma ọ bụ akara ngosi).
Ka anyi dokwuo anya maka uzo di na nwunye. Ikekwe ị bụ Salesforce na ị na-echebara ụlọ ọrụ na-ahụ maka ego echiche:
Ndị ọrụ ụlọ ọrụ ego na-agba mbọ iwulite mmekọrịta na afọ dijitalụ.
N'ezie, n'ọmụmụ ihe sitere na PWC, 46% nke ndị ahịa anaghị eji alaka ma ọ bụ ebe ịkpọ oku, site na 27% naanị afọ anọ gara aga.
Ndị ọrụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ego ga-atụkwasị obi na usoro nkwukọrịta ọwa niile, iji nye uru ma hazie mmekọrịta na atụmanya ha na ndị ahịa ha.
Salesforce bu onye ndu ndi ahia nke Stack nye ndi oru ego.
Site na njikọta enweghị njikọ n'etiti CRM ha, yana ikike njem nwere ọgụgụ isi na ọgụgụ isi na Cloud Cloud, Salesforce na-enyere ụlọ ọrụ teknụzụ ego aka ịkọwa nkewa dijitalụ.
Gartner, Forrester na ndị nyocha ndị ọzọ ghọtara Salesforce dị ka ikpo okwu kachasị ewu ewu na nke a na-ahụkarị na ụlọ ọrụ ahụ. Ha na ndi otu ndi otu ego na ndi nwere ego kariri oru ka Bank of America, wdg, wdg.
N'ezie, ihu akwụkwọ dị n'ime nwere ike banye n'ime nkọwa miri emi karị. Can nwere ike (ma kwesiri) ịgbakwunye ọdịnaya a na onyonyo, eserese, na vidiyo. Nakwa, ị kwesịrị ịnye ụzọ maka onye ọbịa ọ bụla igwu ala.
Ọ bụrụ n ’iweta ọdịnaya 7 ndị a na ibe ọ bụla nke saịtị gị lekwasịrị anya n’ịkwọ onye ọbịa ka ị rụọ ọrụ, ị ga-enwe ihe ịga nke ọma. Ndakpọ a na enyere ndị ọbịa aka ịghọta etu ị ga-esi nyere ha aka yana ma ị tụkwasịrị gị obi ma ọ bụ na ị gaghị atụkwasị ya obi. Ọ na - akpali ha ime mkpebi mkpebi ebumpụta ụwa ha.
Ọ gụnyere ọdịnaya dị mkpa iji wulite ntụkwasị obi ma mee ka ikike gị sikwuo ike. Trusttụkwasị obi na ikike bụ ihe mgbochi dị mkpa nye onye ọbịa na-eme ihe.
Na-ekwu okwu nke…
Kpọọ ka ị rụọ ọrụ
Ugbu a ị gaferela onye ọbịa gị na usoro a, mee ka ha mata ihe nzọụkwụ ọzọ bụ. O nwere ike ịbụ mgbakwunye na ụgbọ ma ọ bụrụ na ọ bụ ngwaahịa, dozie ngosi ma ọ bụrụ na ọ bụ ngwanrọ, budata ọdịnaya ndị ọzọ, lelee vidiyo, gwa onye nnọchi anya site na nkata, ma ọ bụ ụdị iji rịọ ozi ndị ọzọ.
Couplefọdụ nhọrọ nwere ike ịba uru, na-enyere ndị ọbịa ahụ chọrọ ịme nyocha igwu ala ma ọ bụ ndị dị njikere ịgwa ndị ahịa okwu ka ha nyere aka.
Tags: njikarịcha ntụgharịụzọ ntụgharịọdịda peeji nke mgbanweọdịda peeji nke njikarịcha
Inweta: Ebe ahia ahia